သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုရဲ့ ခငျပှနျးဟောငျးမှအမြားသိစရေနျနိုငျငံပိုငျသတငျးစာမှတဆငျ့သတိပေးခံလိုကျရတဲ့မိုးဟကေို – Maythadin
May Thadin | June 13, 2021 | Celebrity | No Comments
သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုနှငျ့လငျမယားအဖွဈမှကှာရှငျးခဲ့သညျ့ ညီညီထှနျးမှ အမြားသိစရေနျကွညောထညျ့ဖျောပွ
သရုပျဆောငျ မိုးဟကေို၏ ခငျပှနျးဟောငျးမှ တရားဥပဒအေရ နှဈဦးပိုငျပစ်စညျး ဖွဈနဆေဲ မွနှေငျ့နှဈထပျတိုကျအား သရုပျ ဆောငျ မိုးဟကေိုမှ ပွငျဆငျပွု လုပျနသေညျ့အတှကျ ထိုပွငျ ဆငျမှုကို ဆကျမပွုလုပျရနျ ရှနေ့ကေတဆငျ့ နိုငျငံပိုငျသတငျးစာတှငျ ကွညောလိုကျသညျ။
ယခုအခါ ယငျးအမိနျ့ဒီကရီကို နပွေညျတျော၊ပွညျထောငျစုလှတျတျောခြူပျသို့ အယူခံအဆငျ့ဆငျ့ဝငျခဲ့ပွီးရနျကုနျတိုငျးတရာလှတျတျော၏ အမိနျ့ဒီကရီကိုအတညျပွုခဲ့ပွီးဖွဈ၍ ယငျးအမိနျ့အတိူငျးဆကျလကျဆောငျရှကျနကွေောငျးသိရပါသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး တရားလှတျတျော တရားမကွီးအမှုအ မှတျ ၁၄/ ၂၀၁၃ တှငျ ဦးညီညီထှနျးက ဒျေါအေးအေးခိုငျ (ခ) သရုပျဆောငျ မိုးဟကေို အပျေါ လငျမယား ကှာရှငျးပေးစလေိုမှု နှငျ့ နှဈဦးပိုငျပစ်စညျး ခှဲပေးစလေိုမှုကို စှဲဆိုခဲ့ရာ(၈.၈. ၂၀၁၃) ရကျတှငျ တရားဝငျ လငျမယား ကှာရှငျးပွတျစဲကွောငျး ဒီကရီ ခမြှတျခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ နှဈဦးပိုငျဖွဈသော ဗဟနျးမွို့နယျ သံလှငျလမျးအမှတျ ၇၄ ဘီ ဟုချေါတှငျသော မွနှေငျ့နှဈထပျတိုကျကို ထကျ ဝကျခှဲယူကွရနျ ၁၈. ၂. ၂၀၁၉ ရကျတှငျ အမိနျ့ဒီကရီ ခမြှတျခဲ့သညျ။ ယငျးအမိနျ့သညျ အယူခံအဆငျ့ဆငျ့ ဝငျခဲ့သျောလညျး အထကျ ပါ အမိနျ့ဒီကရီအတိုငျး ဆကျလကျအတညျ ပွု ဆောငျရှကျနဆေဲဖွဈကွောငျး၊
သို့သျောလညျး သရုပျဆောငျ မိုးဟကေိုမှ တဈဦိးတညျးသဘောဖွငျ့ အခငျြးမွနှေငျ့မွပေျေါရှိ နအေိမျအဆောကျအအုံအားပွု ပွငျပွငျဆငျခွငျးမြား ပွုလုပျနကွေောငျး တှရှေိ့ရသဖွငျ့ ခငျပှနျးဟောငျး ဦးညီညီထှနျး၏ သဘောတူညီမှု မရှိဘဲသရုပျဆောငျ မိုးဟကေို အနဖွေငျ့ တဈဦးတညျး သဘောဆန်ဒအရရောငျးခခြွငျး၊ေ ပါငျနှံခွငျး၊ လှူဒါနျးခွငျး
၊ စှနျ့လှတျခွငျး၊ ပေးကမျးခွငျး၊တဈနညျးနညျးဖွငျ့ လှဲပွောငျးခွငျး ၊အာမခံထားခွငျး၊ ပွုပွငျပွငျဆငျခွငျးတို့ကို မပွုလုပျရနျ ရှနေ့ကေတဆငျ့နိုငျငံပိုငျ သတငျးစာတှငျ ကွညောလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။ထိုသို့ပွုလုပျနခေဲ့သညျကို လကျခံဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ ကူညီခွငျး၊ လှဲပွောငျး လကျခံဝယျယူခွငျး စသညျတို့လညျး မပွုလုပျကွရနျ ထပျမံအသိပေးထားသညျ။
သို့မဟုတျပါက ဥပဒနှေငျ့အညီ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ဦးညီညီထှနျးက ဆိုထားသညျ။ ဖတျရူပေးကွတဲ့ ပရိသတျအ ပေါငျး ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ကနျြမာခမျြးသာကွပါစခေငျဗြာ။
သရုပ်ဆောင်မိုးဟေကိုနှင့်လင်မယားအဖြစ်မှကွာရှင်းခဲ့သည့် ညီညီထွန်းမှ အများသိစေရန်ကြေညာထည့်ဖော်ပြ
သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို၏ ခင်ပွန်းဟောင်းမှ တရားဥပဒေအရ နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်း ဖြစ်နေဆဲ မြေနှင့်နှစ်ထပ်တိုက်အား သရုပ် ဆောင် မိုးဟေကိုမှ ပြင်ဆင်ပြု လုပ်နေသည့်အတွက် ထိုပြင် ဆင်မှုကို ဆက်မပြုလုပ်ရန် ရှေ့နေကတဆင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ကြေညာလိုက်သည်။
ယခုအခါ ယင်းအမိန့်ဒီကရီကို နေပြည်တော်၊ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ချူပ်သို့ အယူခံအဆင့်ဆင့်ဝင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတရာလွှတ်တော်၏ အမိန့်ဒီကရီကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ယင်းအမိန့်အတိူင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားမကြီးအမှုအ မှတ် ၁၄/ ၂၀၁၃ တွင် ဦးညီညီထွန်းက ဒေါ်အေးအေးခိုင် (ခ) သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို အပေါ် လင်မယား ကွာရှင်းပေးစေလိုမှု နှင့် နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်း ခွဲပေးစေလိုမှုကို စွဲဆိုခဲ့ရာ(၈.၈. ၂၀၁၃) ရက်တွင် တရားဝင် လင်မယား ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်း ဒီကရီ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် နှစ်ဦးပိုင်ဖြစ်သော ဗဟန်းမြို့နယ် သံလွင်လမ်းအမှတ် ၇၄ ဘီ ဟုခေါ်တွင်သော မြေနှင့်နှစ်ထပ်တိုက်ကို ထက် ဝက်ခွဲယူကြရန် ၁၈. ၂. ၂၀၁၉ ရက်တွင် အမိန့်ဒီကရီ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းအမိန့်သည် အယူခံအဆင့်ဆင့် ဝင်ခဲ့သော်လည်း အထက် ပါ အမိန့်ဒီကရီအတိုင်း ဆက်လက်အတည် ပြု ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊
သို့သော်လည်း သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကိုမှ တစ်ဦိးတည်းသဘောဖြင့် အချင်းမြေနှင့်မြေပေါ်ရှိ နေအိမ်အဆောက်အအုံအားပြု ပြင်ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ခင်ပွန်းဟောင်း ဦးညီညီထွန်း၏ သဘောတူညီမှု မရှိဘဲသရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို အနေဖြင့် တစ်ဦးတည်း သဘောဆန္ဒအရရောင်းချခြင်း၊ေ ပါင်နှံခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း
၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း ၊အာမခံထားခြင်း၊ ပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရန် ရှေ့နေကတဆင့်နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင် ကြေညာလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ထိုသို့ပြုလုပ်နေခဲ့သည်ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကူညီခြင်း၊ လွှဲပြောင်း လက်ခံဝယ်ယူခြင်း စသည်တို့လည်း မပြုလုပ်ကြရန် ထပ်မံအသိပေးထားသည်။
သို့မဟုတ်ပါက ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးညီညီထွန်းက ဆိုထားသည်။ ဖတ်ရူပေးကြတဲ့ ပရိသတ်အ ပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်မာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။